Filtrer les éléments par date : jeudi, 21 mars 2019
RN12 A sy RN9: Ho tontosaina ao anatin’ny telo taona hoavy ny fanamboarana
Mampitohy an’i Vangaindrano sy Faradofay ny lalampirenena RN12 A, ary tohin’ny lalam-pirenena RN9 miainga ao Toliara mankany Imanja no hasiam-panamboarana ato anatin’ny telo taona hoavy, ary indrindra ny fanamboarana ny tetezana mirefy 900 m ao Bevoay.
Pierre Nanahary na Ralala, hoy ny fiantson’ireo namany azy fahavelony. Iray tamin’ireo mpikambana mpamorona ny tarika Ny Nanahary izy. Teny anaty saha Anosipatrana – Antananarivo Faha-IV no nisy azy. Nodimandry ny alin’ny alarobia hifoha ny alakamisy 21 martsa i Pierre Nanahary.
jeudi, 21 mars 2019 14:23
Manandafy Rakotonirina: Nafenina ao Andriana - Ambohimahazo
Tontosa omaly alarobia 20 martsa ny fanafenana ny nofo mangatsiakan’i Manandafy Rakotonirina. Tao amin’ny Fokontany Andriana, Kaominina ambanivohitra Ambohimahazo, Distrikan’i Manandriana no nanatanterahana izany.
Ankoatra ireo mpiray antoko aminy, dia mpanao politika tonga nanotrona ny fianakaviana tamin’ny fotoana farany nanafenana an’i Manandafy Rakotonirina ampasan-drazana.
Tonga tany an-toerana nandeha helikôptera i Sylvain Rabetsaroana, ny mpikambana ao amin’ny CFM (Conseil du Fampihavanana Malagasy) Razaka Oliva.
jeudi, 21 mars 2019 14:16
« Vary mora »: 3kg isan-tokantrano, vidiana amin’ny kara-pokontany
Hanomboka ny sabotsy 23 martsa 2019 ho avy izao ny fanapariahana ireo « vary mora » 16 500 taonina efa tonga ao Toamasina. Hamidy Arivo ariary (1000 Ar) ny kilao.
Ferana ho telo (3) kilao ny « vary mora » hamidy ho an’ny tokantrano iray ary indroa isan-kerinandro eny anivon’ny Fokontany, izay vidiana amin’ny alalan’ny kara-pokontany.
Ny fianakaviana sy sokajin’olona tena sahirana no hisitraka ny « vary mora », izay haparitaka any amin’ny Faritra rehetra manerana an’i Madagasikara.
Tafiditra ao anatin’ny tetik’asa hamonjena ny hamehana ara-tsosialy « Plan d’urgence sociale » sy tantsoroka ho fanampiana ny vahoaka Malagasy sy fitsinjovana manokana ireo tena marefo sy mahantra, araka ny fampanantenana nataon’ny filoham-pirenena.
jeudi, 21 mars 2019 13:38
Antalaha: Tonga handamina ny praiminisitra Ntsay Christian
Taorian'ny sakoroka teto Antalaha omaly, ka nahamay ny biraon'ny Jirama, ary nahafatesana olona roa sy naharatrana roa hafa dia tonga nitsidika sy nampahery ny fianakavian'ireo manaman-jo sy ireo izay naratra tsaboina eny amin'ny hopitaly be ny Praiminisitra lehiben’ny governemanta Ntsay Christian sy ny Minisitry ny Ati-tany sy ny fanapariaham-pahefana Razafimahefa Tianarivelo, amin’ny anarany fitondram-panjakana.
Roa mianadahy no naratra, izay mbola manaraka fitsaboana eto amin' ny hopitaly be Antalaha, ary roa ihany koa no namoy ny ainy.
Ny razana iray dia andrasana ao Ambatoratsy, fa ny iray mbola amin'ny tranom-paty eny amin’ny hopitaly miandry ny fianakaviany, io atoandro io.
jeudi, 21 mars 2019 13:34
BCMM: Nesorina ny Tale Jeneraliny
Nofoanana omaly nandritra ny filankevitry ny minisitra ny didim-panjakana nanendry ny Tale Jeneralinn’ny BCMM (Bureau du Cadastre Minier de Madagascar) araka ny tolokevitry ny minisitra misahana ny harena ankibon’ny tany sy ny Loharanonkarena stratejika.
Tamin’ny taona 2000 no nananganana ny BCMM. Misy masoivohony ao Antananarivo, Antsiranana, Sambava, Mahajanga, Maevatanana, Ambatondrazaka, Toamasina, Antsirabe, Fianarantsoa, Manakara, Toliara, Taolagnaro ary Morondava.
jeudi, 21 mars 2019 13:21
OMNIS: Rava ny Filan-kevim-pitantanana
jeudi, 21 mars 2019 11:06
INSTAT: Romalahy Mande Isaora Zefania no Tale Jeneraly vaovao
Noraisina nandritra ny filankevitry ny minisitra omaly ny didim-panjakana manendry ny Tale jeneralin’ny Ivontoeram-pirenena misahana ny Antotanisa, na « Institut National de la Statistique ».
Araky ny tolokevitry ny Ministeran’ny Fitantanambola sy ny toe-karena dia voatendry hisahana izany andraikitra izany i Romalahy Mande Isaora Zefania.
jeudi, 21 mars 2019 11:03
Filankevitry ny minisitra: Nesorina avokoa ireo « Préfets »
Nofoanana nandritra ny filankevitry ny minisitra omaly ny didim-panjakana nanendry ireo « Préfets » rehetra nanerana ny Nosy, araka ny tolokevitry ny minisitry ny ati-tany sy ny fanapariaham-pahefana.
Mbola tsy misy solony hatreto.
CNaPS: Nesorina ny Tale Jeneraly
Nofoanana nandritra ny filankevitry ny minisitra omaly ny didim-panjakana manendry ny Tale Jeneralin’ny Tahirim-pirenena ho fitsinjovana ara-tsosialy na CnaPS, toerana izay notazomin’i Arizaka Rabekoto Raoul, araka ny tolokevitry ny minisitry ny asa, fampananan’asa, ny asam-panjakana ary ny lalàna sosialy.
Tsy mbola voatendry kosa izay hasolo azy.